ကျူးဘားနှင့်၎င်း၏အမည်၏မူလအစ | Absolut ခရီးသွားခြင်း
ဒံယလေက | 15/04/2021 12:27 | အဆင့်မြှင့်တင် 15/04/2021 13:27 | ကျူးဘား
၎င်းသည်အန္တာရယ်ကျွန်း၏အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်ပြီးကာရစ်ဘီယံတွင်အကောင်းဆုံးခရီးသွား one ည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်နှင့်ရှည်လျားသောနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သမိုင်းနှင့်အတူတစ်မူထူးခြားတဲ့နှင့်အထူးနေရာ။ ဒါပေမယ့် ကျူးဘား၏နာမသည်အဘယ်မှလာသနည်း။ ၎င်း၏အမည်၏မူလအစကဘာလဲ ဤမေးခွန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤစာစောင်တွင်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားမည့်မေးခွန်းဖြစ်သည်။
အမှန်တရားမှာထိုစကားလုံး၏မူလအစဖြစ်သည် ကျူးဘား ၎င်းသည်လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရဘဲယနေ့ခေတ်ပညာရှင်များအကြားအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နေသည်။ ယူဆချက်များစွာရှိသည်၊ အချို့သည်အခြားသူများထက် ပို၍ လက်ခံသည်၊ အချို့မှာအလွန်စပ်စုသည်။
ပထမ ဦး စွာအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ကိုရှင်းလင်းရမည် ခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်စ် သူသည် (၁၄၉၂၊ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင်) ပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်းပေါ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူသည်တိုက်ကြီးသစ်ပေါ်တွင်ခြေလျင်တပ်ဆင်နေသည်ဟုမည်သည့်အချိန်၌မျှမထင်ခဲ့ပါ။ အမှန်မှာ၊ သူတို့၏မှားယွင်းသောတွက်ချက်မှုအရထိုမြေနေရာသစ်သည် Cipango (သာလျှင်ဂျပန်ဟုသိခဲ့ရသည်) သာဖြစ်နိုင်ပြီးကျွန်းအားမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုနှစ်ခြင်းခံရန်ဖြစ်နိုင်ချေမရှိပါ။
ခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်သည် ၁၄၉၂၊ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင်ကျွန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကျူးဘားဟူသောစကားလုံးကိုဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှုတ်ဖြင့်ကြားခဲ့ရသည်။
နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်စပိန်လူမျိုးကဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုနာမည်နှင့်အတူအမည်ပေးခဲ့သည် Juana ကျွန်းငယ်ရွယ်သောမင်းသားဂျွန်၏အထီးကျန်ဖြစ်သောသားလေးအတွက်ဂုဏ်ပြုသည် ကက်သလစ်ဘုရင်များ။ သို့သော်ဤနာမကိုအမှီမလိုက်ဘူး ၁၄ ရာစုနှစ်တွင်အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်သရဖူကိုဆက်ခံသူအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသူကိုအချိန်မတန်ဘဲသေဆုံးနိုင်ခြင်းသည်ဤအချက်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်မှာသေချာသည်။
ထို့နောက် ၁၅၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်တော်ဝင်အမိန့်တော်အားဖြင့်ကျူးဘား၏တရားဝင်အမည်ကိုနိုင်ငံ၏အမည်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ဖာနန်ဒီနာကျွန်းဘုရင်ကိုဂုဏ်တင်သော်လည်းထိုအမည်ကိုမလိုက်နာခဲ့ပါ။ အမှန်မှာ ၁၆ ရာစု၏ဒုတိယတစ်ဝက်၏တရားဝင်လုပ်ရပ်များသည်ကျူးဘားအမည်ရှိဤနယ်မြေကိုသာရည်ညွှန်းသည်။
2 ကျူးဘားစကားလုံး၏မူလအစနှင့်ပတ်သက်။ စပ်စုယူဆချက်
ဒီနေ့ "ကျူးဘား၏နာမသည်အဘယ်မှလာသနည်း" ဟူသောမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ခံမှုအရှိဆုံးရှင်းပြချက်မှာထိုမေးခွန်း၏အဖြေဖြစ်သည် ဌာနေဇာစ်မြစ်.
Cubans များစွာသည်သူတို့၏တိုင်းပြည်၏အမည်ကိုဌာနေတိုင်းရင်းသားစကားလုံးမှဆင်းသက်လာသည်ဟူသောအတွေးကိုနှစ်သက်ကြသည်။ kuba, ကအားဖြင့်ပြောပြီဘာသာစကားမှာဖြစ်ကောင်းအသုံးပြုခဲ့သည် ထွန်း။ ဤစကားလုံးဆိုလိုပါလိမ့်မယ် "မြေ" သို့မဟုတ် "ဥယျာဉ်။ " ဒီသီအိုရီအရဒီဂိုဏ်းဂဏကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကြားဖူးမယ်ဆိုတဲ့ကိုလံဘတ်စ်ကိုယ်တိုင်ပဲ။
ဌာနေတိုင်းရင်းသားအယူအဆတစ်ခုအရ၊ ဤအမည်၏အဓိပ္ပာယ်သည်မြင့်မားသောတောင်များနှင့်တောင်များလွှမ်းမိုးသောနေရာများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ဒါကသင့်လျော်သောနေရာအချို့အမည်များနှင့်အတူသရုပ်ပြခံရဖို့ပုံရသည် ကျူးဘား၊ ဟေတီနှင့်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ.
အဖေ Bartolomé de las Casas၁၅၁၂ မှ ၁၅၁၅ အကြားတွင်ကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့် angel ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သူသည်သူ၏လက်ရာများတွင်ကျောက်တုံးများနှင့်တောင်ကြီးများအတွက်အဓိပ္ပာယ်တူအဖြစ် cubao နှင့် cibao ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုထောက်ပြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုအချိန်မှစ။ ယနေ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအမည်ကို ကျူးဘား တိုင်းပြည်နှင့်အရှေ့ပိုင်း၏တောင်တန်းဒေသများသို့။
ထို့ကြောင့်ကျူးဘား၏အမည်သည်ထိုရှုခင်းကိုတိုင်းပြည်အား၎င်း၏အမည်ပေးသောကိစ္စများတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Taino နှင့် Antillean ဘာသာစကားများကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိခြင်းကြောင့်၎င်းအားပိုမိုလေးနက်စွာအတည်ပြုခြင်းမှတားဆီးထားသည်။
တစ် ဦး လည်းရှိပါသည် ပေါ်တူဂီအယူအဆ လက်ရှိအခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ခဲယဉ်းပေမယ့်ကျူးဘား၏နာမကိုအဘယ်အရပ်ကလာသလဲဆိုတာရှင်းပြရန်။ ဤသီအိုရီအရ "ကျူးဘား" ဟူသောစကားလုံးသည်ပေါ်တူဂီတောင်ပိုင်းရှိမြို့တစ်မြို့မှလာသည်။
ပေါ်တူဂီ၏ "ကျူးဘား" ၏ဒေသတွင်း၌တည်ရှိသည် Baixo Alentejo, Beja မြို့အနီး။ ၎င်းသည်ကိုလံဘတ်စ်၏မွေးရပ်မြေဖြစ်သည်ဟုဆိုသောနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသီအိုရီကိုထောက်ခံသည့်အယူအဆမှာကာရစ်ဘီယံကျွန်းအားသူ၏ဇာတိမြေကိုအမှတ်ရပြီးနှစ်ခြင်းခံမည့်သူဖြစ်လိမ့်မည်။
အရင်ထောက်ခံချက်ထက်ပိုပြီးထူးထူးခြားခြားပြောရရင်သူကထောက်ခံသူတွေလည်းရှိတယ်။ သူမ၏အဆိုအရ "ကျူးဘား" ၏ toponym ၏တစ်မူကွဲဖြစ်လိမ့်မယ် အာရဗီစကားလုံး koba ။ ၎င်းကိုအမိုးခုံးများဖြင့်ပြည့်နေသောဗလီများကိုသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အာရပ်သီအိုရီကိုခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်စ်၏ဆင်းသက်ရာနေရာတွင်အခြေပြုသည် Bariay ပင်လယ်အော်လက်ရှိHolguínပြည်နယ်၏။ ထိုတွင်ကမ်းရိုးတန်းအနီးရှိတောင်တန်းများပြားနေသောပုံသဏ္beenာန်များသည်အာရပ်ကော့ဘ်များ၏ရေကြောင်းသွားလာမှုကိုသတိပေးလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ကျူးဘားနှင့်၎င်း၏အမည်၏မူလအစ